महराजस्ता नेता कति छन् भनेर जनताले सोधेका छन्
नेमकिपा उमेदवार–निरज लबजू
२०७६ मंसिर ११ बुधबार ०७:४६:००
शनिबार हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु हुँदैछ । दलहरु उपनिर्वाचनका लागि अन्तिम कसरतमा छन् । अहिले हुने निर्वाचनमा सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था नभए पनि दलहरुले यसलाई ‘मिनी जनमत संग्रह’का रुपमा लिएका छन् ।
शीर्ष नेताहरुलाई अहिले वडादेखि प्रदेश र संघसम्म हुने निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बोधन गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।
कास्की २ को प्रतिनिधिसभा, भक्तपुर, दाङ र बाग्लुङका तीन प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गरी ५२ पदमा १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
उपत्यकाको हकमा भक्तपुर–१ (क) मा पनि शनिबार मतदान हुँदैछ । सो क्षेत्रमा सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्ष कांग्रेस र नेमकिपाबीच नै प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । उपनिर्वाचनको तयारी, घरदैलो अभियान, जनताका आकांक्षालगायतका विषयमा नेमकिपाका उमेदवार निरज लबजूसँग बाह्रखरीका अक्षर काका र केशव सावदले गरेको कुराकानीः
निर्वाचनको तयारी कस्तो हुँदै छ ?
हामी घरदैलो कार्यक्रम लगभग अन्तिम चरणमा छौं । घरदैलोसँगै ठाउँठाउँमा चुनावी सभा गरेर हामी हाम्रो विचार, धारणा र नेमकिपालाई मत दिनुपर्ने कारणका विषयमा बुझाउँदै छौं । त्यसबाहेक अरु भेटघाटका कार्यक्रमहरु पनि हुँदैछन् । यही हो हामी प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं ।
यसअघिको निर्वाचनमा पनि उमेदवार हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलाको जनआकांक्षा र अहिलेको जनआकांक्षा कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामीले घरदैलो कार्यक्रम गरिरहँदा अहिलेका सरकारहरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारप्रति जनताको असनतोष मात्रै होइन एक प्रकारको अक्रोश नै छ । उहाँहरु भनिरहनुभएको छ– खोई त विकास ? खोई त समृद्धि ।
सरकारहरु गठन भएका दुईवर्ष बितिसकेको छ । दुईवर्षको अन्तरालमा आफूले गरेका प्रतिवद्धता गरेका के कुराहरु पूरा भएका छन् ? हिजोको जीवन र आजको जीवनमा के अन्तर छ र ? त्यसकारण जसरी ज्वालामुखी विष्फोट हुनभन्दा अगाडि लाभाहरु हलचल हुन्छ त्यस्तो प्रकारको जनअसन्तोष र जनआक्रोश देखिन्छ ।
कस्तो प्रकारको जनआक्रोश ?
सरकारले काम गरेन । सरकारले हिजो व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गरेन । बरु सरकार एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै गयो । बदनाम हुँदै गयो । निर्मला पन्तको हत्यारा–बलात्कारी को हो भनेर प्रश्न सोधे । कृष्णबहादुर महराजस्ता मान्छेहरु नेकपाभित्र कति जना छन् ? तिनीहरु कहिले बाहिर आउँछन् ? त्यस्तो विशिष्ट पदमा बसेको मान्छेले पनि अनैतिक काम गर्दा हाम्रो समाज कतातिर जान्छ ?
एनसेलको कर किन मिनाहा गरियो ? चुनावको बेलामा चन्दा दिँदैमा राज्यले पाउनुपर्ने कर पनि मिनाहा गर्न मिल्छ ?
बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरियो, किन निजीकरण गरिएको हो ? निजीकरण गर्ने मान्छेलाई किन कारबाही गरिएन ? यावत यस्ता धेरै प्रश्नहरु मतदाताले राखे । यि प्रश्नहरु सरकारप्रति लक्षित थिए ।
यसका साथसाथै यो नगरकोट सडकका विषयमा पनि जनतामा तीव्र आक्रोश छ । किनभन्दा भने दुईवर्षमा सकिनुपर्ने काम सातवर्ष वितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । काम नसिकएको मात्रै होइन, कामको जिम्मेवारी पाउने ठेकेदारलाई अर्को ठेक्का दिइएको छ, मेलम्चीको पाइप ओछ्याउने काम दिइएको छ ।
के कुनै सत्तासिन दलको नेताको घरभेटी हुँदैमा शारदाप्रसाद अधिकारीलाई कानुन नलाग्ने ? कानुनको केही अर्थ हुँदैन । दुईवर्षमा सकिने काम सातवर्षसम्म नसक्काउँदा पनि अर्को काम दिने ? शारदाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही गर्न मिल्दैन ? शारदाप्रसाद अधिकारीलाई जेलमा हाल्न मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न यतिखेर सुनिँदैछन् ।
अब नेमकिपाको एउटा सांसद थपिदैमा के हुन्छ त ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिले पनि एउटा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सौन्दर्य पक्ष भनेको प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्ष बलियो भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।
अहिले प्रतिपक्ष पनि कमजोर छ । नेपाली कांग्रेस आफैँ पनि एउटा कमजोर प्रतिपक्षको रुपमा देखिएको छ । उ आफैँ भागबण्डाको राजनीतिमा लागेको छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा, लामो समयसम्म देशमा शासन सत्ता चलाइसकेको भए पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
किनभन्दा नेकपाले कांग्रेसलाई तिम्रो पालामा के गरेका थियौ र ? भनेर प्रश्न गर्दा कांग्रेससँग जवाफ छैन ।
यस्तो अवस्थामा नेमकिपाको एकजना सांसद थपिनु भनेको प्रखर प्रतिपक्ष एकजना थपिनु हो । प्रखर प्रतिपक्षले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ । हामी सरकारका गलत क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले अगाडि बढ्छौं । नेमकिपाको एक जना थपिँदाको विशेष महत्व भनेकै यही हो ।
जनताले बढीभन्दा बढी बजेट खोजिरहेका हुन्छन्, विकास खोजिरहेका हुन्छन् । तर नेमकिपा गयो भने उही संसद्को पछाडिको बेञ्चमा बस्ने र मेरो नियमापत्ति छ भन्ने मात्रै न हो । त्यो बाहेक अरु त केही देखिँदैन भन्छन् नि तपाईँहरुलाई प्रतिपर्धी दलले ?
हामीले विकास नगर्ने कहाँ भनेका छौं र ? हामी प्रदेशसभामा गएर त्यसो प्रकारको ऐन बनाउँछौंकि जसले हाम्रो गाउँको विकास गर्छ । त्यो गाउँठाउँ भनेको चाँगुनारायण मात्रै होइन, अथवा यो प्रदेश नम्बर १ ‘क’ मात्रै होइन । सिंगो १३ वटा जिल्लाहरुको विकासका विषयमा ऐन कानुन बनाउने हो ।
अर्को लास्ट बेञ्चमा बसेर नियमापत्ति गर्ने भन्ने आरोप छ नि, के उहाँहरु लोकतन्त्रको विरोध गर्न थाल्नुभएको हो ? उहाँहरु लोकतन्त्रको विरोधमा उत्रिनुभएको हो ? नियमापत्ति जनाउने, प्रतिपक्षले बोल्ने, प्रतिपक्षले हाउसमा कुरा राख्ने भनेको त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र ?
यही कुरा ल्याउनका निमित हामीले आन्दोलन गरेको होइन ? हिजो हामीले पञ्चायत किन फाल्यौं ? के उहाँहरु राणा शासनमा फर्किन खोज्नुभएको हो ? राणा–पञ्चायतकालमा पो कसैले विरोध गर्दैनथ्यो सरकारको । के अहिलेको नेकपाका नेताहरुले पनि नियमापत्तिको कुरालाई खिल्ली उडाएर लोकतन्त्र मास्न खोज्नुभएको हो ?
उहाँहरुले देशलाई राणा शासनकालमा फर्काउन खोज्नुभएको हो ? के उहाँहरुले यो देशमा अधिनायवादी शासन चाहनुभएको छ ?
यो लोकतन्त्रको सामान्य जानकारी राख्ने मान्छेले गर्ने तर्क हुँदै होइन । सत्तापक्ष वास्तवमै लोकतन्त्रको पक्षमा हो भने त उहाँहरुले प्रतिपक्षीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ । उहाँहरुले उत्साहित गर्नुपर्छ । हाम्रो के कमजोरी छ भन्दिनुस्, यो विधेयकमा के कमजोरी छ ल आउनुस् छलफल गरौं भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
अर्को कुरा बजेटको जुन छ, के सरकारमा गएको राजनीतिक पार्टीको मान्छेमात्रै जितिसकेपछि बजेट आउँछ भन्ने कुरा हो भने कांग्रेसले जितेको ठाउँमा बजेट जाँदैन र ? अरु दलले जितेको ठाउँमा सरकारले बजेट पठाउँदैन ?
यो त विकासमा पक्षपात भयो । सरकारमा भएको दलले आफूले जितेमात्रै बजेट पठाउने, नजिते नपठाउने भन्ने कुरा पूर्वाग्रह भयो । यो राजनीतिक संस्कृति नै भएन । यो त अधिनायकवादी चिन्तन भयो । पञ्चायती शासन व्यवस्था भयो । हाम्रो तर्क यो हो । त्यस कारण विकास सरकारको दायित्व हो । सांसदहरुको काम भनेको ऐन कानुन बनाउने हो । विकासको जिम्मेवारी सरकारको हो । सत्तारुढ नेकपाका साथीहरु हामी सरकारमा छौं र बजेट ल्याउन हामी मात्रै सक्छौं भनिरहुनभएको छ । यो अत्यन्त गलत कुरो गरिरहनुभएको छ ।
यो क्षेत्रको विकासका लागि नेमकिपाले कस्ता कस्ता योजनाहरु बनाएको छ ?
राजनीतिक रुपमा हामी प्रखर प्रतिपक्षको रुपमा संसदमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । प्रदेशसभामा गएर हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं । मन्त्री बन्नका लागि हामी चुनाव लडिरहेका हैनौं । यहाँ केही मान्छेले चुनाव जितिसकेपछि मन्त्री बन्छु भन्ने कुराहरु गरिराखेको सुनिन्छ । यस्तोखालको प्रचारबाजीले अन्ततः राजनीतिप्रति जनाको वितृष्णा बढाउँछ कालान्तरमा गएर । यसले हामीलाई सही ट्रयाकमा लग्दैन भन्ने मेरो धारणा हो ।
यो क्षेत्रमा नेमकिपाले लगातार संसदमा जित्दै आएका छौं । र संसद विकास कोषको सबै रकम यही क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छौं । हामी निर्वाचित भएर भएसकेपछि जसरी भक्तपुर नगपालिकामा शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनका क्षेत्रमा जसरी काम गरेका छौं त्यसै गरी अब चाँगुनारायण नगरपालिकामा पनि शिक्षा स्वास्थय र पर्यटनका क्षेत्रमा उदाहरणिय ठाउँको रुपमा विकास गर्नेछौं ।
यहाँको जति पनि सम्पदाहरु छन् तिनीहरुको संरक्षण गरेर पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछौं । यहाँको विकास निर्माणमा भइराखेको भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी लड्नेछौं । त्योबाहेक जनताका सानातिना आवश्यकताहरुमा हामी हातेमालो गरेर हगाडि बढ्ने छौं ।
यो क्षेत्रमा नेमकिपाले चुनाव जित्ने आधारहरु के छन् ?
जितका आधारहरु धेरै छन् । पहिलो, यो क्षेत्रमा नेमकिपाको लामो समयदेखिको यहाँका जनताहरुसँगको निकटको सम्बन्ध छ । यहाँका जनताले नेमकिपालाई चिनेका छन्, नेमकिपाले जनतालाई चिनेको छ । यसकारण लगातार हामीले विगत लामो समयेदेखि नै यो क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको निम्ति काम गर्दै आएका छौं । त्यसकारण यहाँका जनताले नेमकिपालाई हिजो पनि विश्वास गरेका थिए र आज पनि विश्वास गर्छन् ।
दोस्रो, अहिले सत्तापक्ष प्रतिको जनआक्रोश, जनअसन्तोष छ । अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भावना जनतामा छ । उपनिर्वाचनमा सत्तासिन पार्टीलाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने जनभावनाले पनि जितको आधारहरु देखिन्छ ।